सरकारी कर्मचारीको लगानीमा, कालीकोटमा ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार..
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालमा छवटा परियोजनामा एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने
काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालका विभिन्न छवटा परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने भएकोे छ । दक्षिण कोरियाको जेजुमा यही असार २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी..
माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत्को निर्माण ५५ प्रतिशत पूरा
रसुवा । उत्तरी रसुवाको चिलिमे क्षेत्रमा निर्माणाधीन माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत बढी काम पूरा भएको छ । साञ्जेन माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुदनसिंह महतका अनुसार १४ दशमलव..
काठमाडौंवासीका लागि दुःखद खबर ! दशैँअघि मेलम्चीको पानी नआउने निश्चित
चौतारा । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काममा सुस्तता आएकाले निर्धारित समयभित्र आयोजना पूरा नहुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू गाउँपालिकास्थित अम्बाथान मुहानदेखि सुन्दरीजलसम्मको २७ दशमलव ५ किमी सुरुङमध्ये तीन..
१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर स् के हो डिपिआर
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ । रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको..
सिभिल बैंकको अगुवाईमा बुंङ्गल हाइड्रोमा एक अर्ब ३६ करोड कर्जा दिने
काठमाडौं । बुंङ्गल हाइड्रो प्रालि द्वारा निर्माण गर्न लागिएको १०.७० मे।वाक्षमताको माथिल्लो सानीगाड जलविद्युत आयोजना सिभिल बैंकको अगुवाई ऋण प्रवाह हुने भएको छ । यस आयोजनाको निर्माणको कुल अनुमानित लागत एक..
चिनिया कम्पनीसँग बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल सरकार र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) बीच १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ..
प्रधानमन्त्रीले गरे फास्ट ट्रयाकको शिलन्यास, निर्माण सुरु, ४ वर्षमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहान बाराको निजगढमा आयोजित एक समारोहबीच फास्ट ट्रयाकको शिलान्यास गरेका..
चीनको वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओबीओआर परियोजनामा समर्थनजनाउँदै हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वका ६४..
झिलीमिली हुँदै पोखरा, तिब्बत सरकारद्वारा एक हजार थान सौर्य बत्ती हस्तान्तरण
पोखरा । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकालाई शनिवार एक हजार थान सौर्य बत्ती हस्तान्तरण गरिएको छ । गत वर्षको कात्तिक ८ गते भएको सम्झौतापछि सात महीनामै पोखराका विभिन्न सडकमा..
पोखरा विमानस्थलको काम छिट्टै शुरू हुन्छ – राजदूत होङ
पोखरा । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम अब छिट्टै शुरु हुने बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा शनिबार आयोजित स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत..
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म ५० प्रतिशत भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको छ। आयोजनाको प्रभावित एवम् डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गर्नुपर्ने ६० करोड मुआब्जमध्ये..
जापान । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका साना सहरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने घोषणा गरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख १६ मुलुकका पत्रकारसँग आज यहाँ..
एशियाली बिकास बैंकको ५० बर्षमा के भयो संस्थापक नेपाललाई उपलब्धि ?
शरच्चन्द्र भण्डारी काठमाडौँ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउने र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट यस क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० पचासौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन्..
२५ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युत स्थानीयले बनाउने
बेनी। स्थानीयवासीको लगानीमा जिल्लामा २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जिल्लावासीको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न लागिएको सो आयोजना निर्माण कम्पनी दरवाङ..
‘हाइड्रो भिलेज’ नारच्याङमा १० जलविद्युत् आयोजना
म्याग्दी । कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा १० वटा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका छन्। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गअन्तर्गत पर्ने नारच्याङ दर्जनौँ हिमशृङ्खला, मगर समुदायको कला र संस्कृति,..
माथिल्लो तामाकोसी तोकिएभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न पुनः घिसिङको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगाडि सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः निर्देशन दिएका छन् । सो..
तल्लो तादी जलविद्युत् आयोजनाको शिलन्यास, २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
नुवाकोट । पाँच मेगावाट क्षमताको तल्लो तादी जलविद्युत् आयोजनाको आइतवार शिलान्यास गरिएको छ । बुद्धभूमि हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको उक्त आयोजनाको बाँधस्थल बालकुमारीको सिम्लेमा ज्येष्ठ नागरिक द्रोणप्रसाद खतिवडा, जयकुमार..
​२०७३ : लोडसेडिङ हटेको वर्ष
काठमाडौं । गत साल चैतमा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौती हुन्थ्यो। उद्योग व्यवसाय चौैपट थियो। मुलुकमा केही हुँदैन भन्नेको जमात पनि ठूलै थियो। सरकारले कार्ययोजना भने नयाँ नयाँ ल्याएको थियो तर..
​आफ्नै लगानीमा स्थानीयले बनाए आठ किमी सडक
म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ बरञ्जाको धापुङवासीले गाउँलेकै लगानीमा गाउँसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छन् । बेनी–बरञ्जा हुँदै झाँक्रेपानी जोड्ने सडकले आफ्नो गाउँलाई नछुने भएपछि महेश–धापुङवासीले सामूहिक लगानीमा गाउँमा मोटरबाटो..
फलाम खानी उत्खनन गर्न सरकारको तयारी, नेपाल आगामी ३० वर्षसम्म आत्मनिर्भर हुने पक्का
नवलपरासी । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन कार्य अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् । बुधवार खानी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि विकट पहाडी हुप्सेकोट गाउँपालिका धौवादी पुगेका..
पर्वत । पर्वत ऊर्जा नदीका रूपमा परिचित मोदीखोलासहित पर्वतका अन्य नदीनालामा सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैछ । जिल्लाका मोदीखोला र पातीखोलामा गरी पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट..
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण
काठमाडौं । सरकारले बारा जिल्लामा निमार्ण गर्न लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । मंगलबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशितगरि गृह मन्त्रालयले ३५ दिन भित्र आवश्यक प्रमाणसहित..
सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले..
३७.६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए जलविद्युतको निर्माण सुरु, १० अर्बको लगानीमा निर्माण हुने
ताप्लेजुङ। आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ताप्लेजुङ र..
जलविद्युतको शेयर कर्णालीबासीले पाउने, शेयर दिने प्रक्रिया उर्जाले अघि बढाउँदै
काठमाडौँ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्पूर्ण युवालाई जलविद्युत् उत्पादनको महाअभियानमा सहभागी भई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन योङ कम्युनिष्ट लिग काठमाडौँको दोस्रो..
चीनले ऊर्जा, रेल्वेलगायतमा सहयोग गर्ने, रेल्वे निर्माण विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चीनका उपप्रधानमन्त्री झाङ गोलीबीच केरुङदेखि काठमाडौं तथा पोखरासम्मको रेल्वे निर्माण, ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विकास, तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन र दुई देशबीचका अन्य नाका सञ्चालन गर्ने..
​प्राधिकरणको वेभसाइटमा पुनर्निर्माण भएका घरको गलत तथ्याङ्क, प्रचारका लागि राख्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेभसाइटमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका घरको गलत तथ्याङ्क राखिएको छ । प्राधिकरणको वेभसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डट एनआरए डट जिओभी डट एनपीमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका घरको सङ्ख्या ४१..
​ऊर्जामन्त्री शर्माले थाले उज्यालो नेपालको अभियान नयाँ नेपाल बनाउने महाअभियान
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उज्यालो नेपालको अभियान नयाँ नेपाल बनाउने महाअभियानको शुरूआत भएको बताएका छन् । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले उज्यालो नेपाल अभियानले नेपाली जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार..
३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु, दुर्इ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य
लमजुङ । बाहुनडाँडा र भुलभुलेको सीमा भएर बग्ने ङादी खोलामा ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । उक्त जलविद्युत् आयोजना विसं २०७६ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण..
Results 1098: You are at page 8 of 37